Yakaonekwa nyowani "Isina kurasikirwa" logo mukati mewebhu vhezheni yeApple Music | Ndinobva mac
Yakaonekwa nyowani "Isina kurasikirwa" logo mukati mewebhu vhezheni yeApple Music
Manuel Alonso | 17/05/2021 14:00 | Rumo
Nenhepfenyuro dzinoburitsa nezve kufambira mberi kutsva muApple Music, isu tave kufanira kunyatsoziva zvese zviri kubuda. Uye ndezvekuti ichangobva kuwanikwa logo nyowani mukati mewebhu vhezheni yeApple Music inonzi «Isina kurasikirwa». Izvi zvinoreva kuti zvatataura nezvazvo mangwanani ano mavhoti ose ari echokwadi. Tine Apple Music nyowani kumberi.
Makuhwa anoratidza izvozvo Apple Music nyowani iri kuuya. Zvirinani maererano nehunhu hwayo odhiyo. Tinofanira kurangarira kuti runyerekupe runoratidza kuti mangwana 18 ichasunungurwa kwete chete maAirPod matsva asiwo hunhu muApple Music usati wamboona. Tinogona kuzvienzanisa naTidal uye izvo zvinoita vashandisi vazhinji vanobatana nebasa iri nekukasira. Yakarasika Hi-Fi mhando uye Dolby Atmos. Iyi logo nyowani inosimbisa kuti izvi ndizvo zvazvichaitika.
Yakawanikwa nemugadziri Stijn de Vries, a nyowani isina Loss logo mukati meApple Music pawebhu. Kune zvekare logo yechipiri inoti "Hi-Res Lossless". Iyi graphic inogona kunge iri chimwe chinhu chebheji inoratidzwa pamwe chete nenziyo dzinotsigira kurasikirwa kwekuteerera odhiyo Akawanda mareferenzi kuLossless odhiyo uye kunyange Dolby Atmos yatowanikwa mukati meApple Music pawebhu.
Hmm tarisa izvo zvandakawana pane iyo Apple Music webhusaiti…. pic.twitter.com/Lb4HbQ6Nww
- Stijn de Vries (@StijnDV) Dai 17, 2021
Kunyange zvakadaro Apple yakaburitsa chiziviso chakakura icho "chinoshandura mimhanzi zvachose" mukupera kwesvondo, haisati yasimbisa kana kuzivisa kuti chiziviso ichi chichaenda kupi. Asi izvo zvatinojekesa ndezvekuti pane zvishoma zvasara kuona shanduko yezano muApple Music. Vakuru vanobatsirwa ndivo vanozove vashandisi ndiani achakoshesa hutsva uhu uyezve achifunga kuti kambani haizoiti sevhisi yekunyorera inodhura uye ichachengeta iyo 9.99 euros pamwedzi mune wega kunyorera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Yakaonekwa nyowani "Isina kurasikirwa" logo mukati mewebhu vhezheni yeApple Music